Odisha Beach Tours | Tora-java-bozaka mamiratra - Mankanesa ankehitriny 993-702-7574
Fikolokoloana fitsaboana amin'ny torapasika mahafinaritra? Ny Odessa Beach Tours Sand Pebbles no valiny tsara indrindra azonao. Odisha dia iray amin'ireo firenena mendri-piderana izay manana kilometatra 485 kilaometatra mahafinaritra. Voatahy amin'ny rano mangatsiaka tsara tarehy, feno ny sasany amin'ireo fasika madio sy madio indrindra izay tsy maintsy atolotr'ity tontolo ity. Sand Pebbles manolotra ny fonosana tsara indrindra ho an'ny Odisha Beach Tours. Io no toerana tsara indrindra hialana amin'ny fialana amin'ny masoandro. Miaraka amin'ny seranam-piaramanidina maro mitombo, dia mihamitombo hatrany ny moron-dranomasin'i Odisha, mamorona lalana tsy misy ahiahy ho anao hitondra ny nofinofinao. Odisha dia toerana goavana lehibe isan-taona, miaraka amin'ny toetr'andro mahafinaritra mandritra ny vanim-potoana rehetra. Tsy izay ihany, ny morontsiraka midadasika midadasika dia midika fa ny vary any Odisha dia samy miovaova arakaraka ny toerana misy azy. Ny tora-pasika Odisha dia miompana amin'ny fampiroboroboana ny zavaboary miavaka amin'ny endriky ny zavakanton'izao tontolo izao, fantsakan-tsakafo manamaivanana, ka mahatonga azy ho tonga lafatra tonga lafatra ho an'ireo mpizaha tany avy amin'ny làlam-piainana rehetra mitady ny fialan-tsasatra mandritra ny androm-piainany. Odisha Beach Tours mandrakotra izany rehetra izany. Tsy misy fomba tsara kokoa ahafahana miaina ny fahafinaretan'ireo kirandrano tsara tarehy noho ny sombin-tsarin'i Sand Pebbles ao Odisha beach Tours.
Ireo fonosana ireo dia mampiseho ny sasany amin'ireo toerana tena mahafinaritra indrindra Odisha dia afaka manolotra, ary koa manala anao amin'ny lalana voavolavola. Ny mpitarika mahay anao dia mitarika anao amin'ny fitsidihana mahatalanjona izay ahitana fankafizana sakafo mahavelona sy mahazatra manerana ny fanjakana. Tsy misy zavatra toy ny mikaroka ny paosinao ao anaty fasika ary mipoitra ao amin'ny masoandro masoandro tropikaly be voninahitra. Ny alahelonao sy ny alahelonao rehetra dia hanasa ny rano mangatsiaka amin'ny rano mangatsiaka, ka hamela anao amin'ny toetry ny filaminana izay tsy fantatrao.
Raha toa ka vonona ny hiaina ny hatsaran-tarehim-pifaliana tsy misy fiafarana ireo kiraro mahavariana be dia be ireo ianao dia mifandraisa aminay anio ary avelao hanampy anao hahita ny fitsangatsanganana taranja Odisha tonga lafatra ho anao. Manolotra anao ny tsara indrindra amin'ny mpizahatany Beach Tours any Odisha ianao, anisan'izany ny Beach Resorts ao Odisha, mba hahafahanao manana fotoana lavalava miaraka amin'ny Tourisme Odisha Beach Tourism Sand Pebbles.
ODISHA BEACH TOUR PACKAGES (Ny alina / andro 9 | Tour Code: 008)
Mivory sy miarahaba ny fahatongavanao any amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Kolkata ary manofy any amin'ny hotely efa voamboatra. Ny sisa amin'ny andro maimaim-poana amin'ny asa manokana. Nandritra ny alina tany Kolkata.
Rehefa avy nitsidika an'i Kolkata ny sakafo maraina ny antsasak'adiny dia nidina tao amin'ny gara nandritra ny tolakandro mba hiditra ny lamasinina mankany Balasore. Mialà ao amin'ny gara balasore ary mandefa mankany Chandipur. Jereo ao amin'ny hotely. Nandritra ny alina tao Chandipur.
Andro feno ny fialan-tsasatra ao Chandipur Beach. Nandritra ny alina tao Chandipur.
Ny maraina taorian'ny sakafo maraina dia mandeha mankany Bhubaneswar mitsidika ny lalana Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (monastera bodista sy Stupas). Nandritra ny alina tao Bhubaneswar
Ny fitsidihana maraina ny Tempoly ao Bhubaneswar (Parsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital). Avy eo dia miampita mankany an-dàlana mankany Konha Dhauli (Ashokan Edicts) & Pipli (Village Work Appliqué). Fandehanana hariva eo akaikin'ny renirano mampifandray ny ranomasina ary miala sasatra eo amoron-dranomasina. Nandritra ny i Konark.
Taorian'ny sakafo maraina dia mitsidika ny Tempolin'i Konark Sun (Black Pagoda), Chandrabhaga Beach ary Ramchandi Temple.Then mitondra fiara Puri Jereo ny hotely. Ny tolakandro tolakandro dia hitsidika ny Tempolin'ny Tompo Jagannath mba handray anjara amin'ny Live Aalati Darshan. Ny hariva dia miala ao amin'ny tsena Golden Beach & Beach Market ao Puri. Nandritra ny alina tao Puri.
Ny fitsidihana maraina ny Tempoly Tompo Jagannath (Tsy mahazo ny Hindus ao amin'ny tempoly), Grand Road Rehefa avy nisakafo maraina ho any Gopalpur dia mitsidika an'i Raghurajpur (Tanànan'ny lovan-tanàna) sy Lake Chilika ao Barkul. Manararaotra ny sambo mitsambikina ao anaty farihy mba hijery ny nosy Kalijai & Nalaban ny nosy Birds.Overnight in Gopalpur.
Taorian'ny sakafo maraina dia mitsidiha ny Taptapani Hot Spring Sulphur. Ny andro maraimbe dia miala ao amin'ny Gopalpur Beach. Nandritra ny alina tao Gopalpur.
DAY 09: FIANGONANA- BERHAMPUR RAILWAY STATION / BHUBANESWAR AIRPORT
Taorian'ny sakafo maraina dia nandeha nankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Berhampur Railway / Bhubaneswar ho any amin'ny dia lavitra.